घर जग्गा जमिन | अर्थव्यवस्था वित्त
घर खरीद र बिक्री क्षेत्रका लागि दृष्टिकोण २०१ 2018 को लागि धेरै सकारात्मक छ किनकि अनुमान गरिएको छ कि सञ्चालनको संख्या १ 18% ले बढ्ने छ। यस अर्थमा, घर जग्गा जमिन एक हुन सक्छ लगानीको विकल्प इक्विटी बजारले देखाएको कमजोरीका कारण अब देखि। १०% भन्दा बढि केहि सब भन्दा सान्दर्भिक स्टक सूचकांकमा गिरावटको साथ। यस परिप्रेक्ष्यमा, क्राउन्डलिnding्ग एक सहयोगी लगानी हो जसले रियल ईस्टेट प्रोजेक्टहरूमा थोरै पैसा खर्च गर्न अनुमति दिन्छ, दुबै खरीद कार्यहरूमा र घरको भाडा.
यो भनिन्छ कि तथाकथित घर जग्गाको अतिक्रमण नयाँ प्रवृत्ति हो जुन लगानी क्षेत्रमा स्थापित गरिएको छ, तर परम्परागतको सन्दर्भमा उल्लेखनीय भिन्न दृष्टिकोणको साथ। यो आफैंमा स्थितिमा यसको रणनीति आधार गर्दछ अचल सम्पत्ति क्षेत्र, तर अत्यधिक मौद्रिक प्रयासहरू नगरीकन, र अन्य लगानीकर्ताहरूसँग समान सुविधाहरूको साथ संयुक्त रूपमा। कुनै पनि सम्पत्ती (घरहरू, परिसर वा अफिसहरू) खरीदको लाभहरूमा भाग लिनुको उद्देश्यको साथ।
यस रणनीतिको नतिजाका रूपमा यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न सजिलो छ किनकि उनीहरूको लगानीको लागि आवश्यक थोरै रकमले व्यावहारिक रूपमा सबै घरहरूमा पहुँच पुर्‍याउँछ। अचम्मको कुरा होइन, यो पहुँच गर्न सकिन्छ केवल १,००० युरो बाट यी सुविधाहरूको साथ केहि प्लेटफर्महरूमा। सम्भावनाको साथ कि फिर्ती १०% सम्ममा पुग्न सक्दछ, स्थायीताको अवधिसँग जुन लगभग and र १ months महिना बीच हुन सक्दछ। एक लगानी मोडेलको माध्यमबाट जुन यस समयमा पूर्ण यसको नवीनताका लागि बाहिर खडा हुन्छ।
1 क्राउडलिन्डि:: क्षेत्रको फाइदा लिनुहोस्
2 परियोजना को वित्तपोषण
3 अपरेशन्सको प्रदर्शन
4 CNMV का साथ दर्ता गरियो
5 लगानीको विकल्प छैन
6 भीडभाडको फाइदा
क्राउडलिन्डि:: क्षेत्रको फाइदा लिनुहोस्
यो सबै, वर्तमान जस्तो एक सन्दर्भमा, जहाँ रियल इस्टेट मार्केट स्पेनमा स्पष्ट प्रगतिमा छ। गत वर्ष बन्द भएको कुल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) को बृद्धिमा एकदम सक्रिय हिस्सा लिइरहेको छ 3,1.१% को बृद्धि संग। यद्यपि हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले २०१ fore को लागि आफ्नो पूर्वानुमान २.2,4% कायम गरेको छ। यस अर्थमा, प्रयोगकर्ताहरूले यस सम्पत्ति क्षेत्रलाई अर्थव्यवस्था राष्ट्रियमा सब भन्दा शक्तिशाली भएको तथ्यको फाइदा लिन सक्दछन्। अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरू माथि, जस्तै बिजुली वा बैंकिंग।
यस क्षेत्रको दृष्टिकोण हालसालैको रिपोर्टले दिएको डाटाका आधारमा स्पष्ट छ स्पेनमा आवासीय बजार यो सर्वोहितायतले तयार पारेको छ। जुन मा यो देखाइएको छ कि घरको बिक्री २०१ 18 मा १%% भन्दा बढि बढ्नेछ, 2018०,००० अपरेशन भन्दा माथि। अचल सम्पत्तिको अधिग्रहण मार्फत र अप्रत्यक्ष रूपमा रियल इस्टेट क्षेत्रको धितोहरुमा कि स्पेनी इक्विटीमा सूचीबद्ध छन् को निवेश को निम्तो एक आंकडा।
परियोजना को वित्तपोषण
तर यदि तपाईंसँग यी अपरेशनहरूसँग डिल गर्न क्रयशक्ति छैन भने, जहिले पनि घर जग्गा जमिनको लागि विकल्पको विकल्प हुन्छ। जे होस् छायाँ को एक श्रृंखला को साथ रोक्न चेतावनी दिन आवश्यक हुनेछ सम्भावित घटनाहरू लगानी मा। जहाँ यी अपरेशनको सब भन्दा ठूलो जोखिम यो तथ्यमा पर्छ कि यो अझै पनि स्पेनमा अवस्थित बजार हो। जहाँ पैसा लगानी गर्ने प्लेटफार्महरू अझै पनि अल्पसंख्यक हुन् र व्यापार मोडेलहरू एक अर्का भन्दा केहि फरक छन्।
यो नवीन रणनीतिले लगानी समूहहरूलाई रियल इस्टेट क्षेत्रमा सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न अनुमति दिन्छ, वित्तीय संस्थाहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको क्रेडिट लाइनहरूको सहारा बिना। यस तरिकाले, तिनीहरू एक श्रृंखला समाप्त गर्न को लागी व्यवस्थापन तपाइँको संचालनमा खर्च जसले परियोजनाहरूको लागत कम गर्दछ। अचम्म मान्नु पर्दैन, यो साना लगानीकर्ताहरू हुन् जसले तिनीहरूलाई प्रस्ताव गर्छन् ताकि तिनीहरू फिर्ताको माध्यमबाट पुरस्कृत हुन सक्छन् जुन १ 15% सम्म पुग्न सक्दछ। जे भए पनि इक्विटी बजारबाट प्राप्त गर्न जटिल र निश्चित आय वा बैंकि products उत्पादनहरू (समय निक्षेप, प्रोमिसरी नोट वा बचत योजना) मा पूर्णतया असम्भव छ।
यद्यपि यो प्रत्येक वर्ष निश्चित फिर्ती होईन, महिनौं पनि होइन। तर यसको विपरितमा, यो विकासमा निर्भर गर्दछ आवास मूल्यहरु। यो एक मुख्य कारण यो हो कि उल्लेखनीय उतारचढावहरू एक अपरेसनबाट अर्कोमा अपरेट हुनको लागि पैसाको लगानीको क्षणमा निर्भर गर्दछ। यो सँधै समान हुँदैन र त्यसकारण ब्याज सुधार गर्नको लागि तपाईंले घर जग्गाको बजारमा अपवर्डको प्रवृत्तिको फाइदा उठाउनुपर्नेछ। उच्च आर्थिक वृद्धि, लगानीकर्तालाई उच्च फिर्ती। २% देखि १%% सम्म फर्काउने दायरा भित्र।
जे भए पनि, रियल ईस्टेट भीड जम्मा गर्ने अर्को सब भन्दा सान्दर्भिक विशेषता यो हो कि यसले सबै प्रकारका समावेश गर्दछ अचल सम्पत्ति परियोजनाहरु, घर जग्गा खरिदबाट भाडा अपार्टमेन्ट सम्म। ठूला शहरहरूको बीचमा रहेको फ्ल्याटहरूबाट अन्य अचल सम्पत्ति प्रस्तावहरू जुन हाम्रो सीमानाहरू छोडिन्छ सँधै प्रयोग गरिएको ईट्टामा लगानी गर्न। उदाहरण को लागी, इटाली, फ्रान्स वा हाम्रो नजिकको वातावरण मा अन्य देशहरु मा। जे होस् कुनै पनि अवस्थामा, हाम्रो देशको लगानीमा उत्पन्न भएकोसँग मिल्दो रिटर्नको साथ।
CNMV का साथ दर्ता गरियो
लगभग छ महिना र तीन वर्ष बीच अनुमानित लाभहरू प्राप्त गर्न यसले छोटो पर्खाइ लिन्छ। यो लगानीको एक कमजोरी हो। यद्यपि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण थोरै पारदर्शिताबाट लिइएको हो जुन भीड जम्मा गर्ने प्लेटफर्महरू प्रदान गर्न सक्छन्। यो सम्भावित समस्याको समाधान गर्न, लगानीकर्ताहरूले यी कम्पनीहरूसँग पंजीकृत छन् भनेर यकिन गर्नुपर्नेछ राष्ट्रिय शेयर बजार आयोग (CNMV) अचम्म मान्नु पर्दैन, यो अपरेशनमा घटनाहरू बाट बच्ने उत्तम रणनीति हो।
साथै, यो सहयोगी मोडेल लगानीले ठूलो लगानीको अनुमति दिँदैन। तर यसको विपरित, न्यूनतम योगदानहरू and० र १०,००० यूरो बीचको हुन्छ। जबसम्म लगानीकर्ता मान्यता प्राप्त हुँदैन र जसमा उसले यी मार्जिनहरू पार गर्ने स्थितिमा रहन्छ। यद्यपि यसको लागि यो आवश्यक हुनेछ कि तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत खाताहरूमा एक घुलनशीलता प्रदान गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, income०,००० भन्दा बढी युरो को वार्षिक आय र १००,००० युरो भन्दा बढीको वित्तीय सम्पत्ति भएको। यस पल देखि, बाँकी सबै अचल सम्पत्ति परियोजना छनौट गर्न को लागी छ कि अधिक लाभदायक हुन सक्छ, यसको स्थान र परियोजना को विशेषताहरु मा निर्भर गर्दछ।
लगानीको विकल्प छैन
यस क्षण देखि, तपाईं यो एक विशेष लगानी को विकल्प को लागी पैसा लगानी लायक हुनेछ वा छैन यो निर्धारित गर्न को लागी एक हुनु पर्छ। यसको जोखिम र फाइदाहरूका साथ, तर कुनै पनि अवस्थामा यो समय चाखलाग्दो हुन सक्छ जब त्यहाँ लगानीको लागि वास्तवमै कुनै विकल्प हुँदैन। किनभने वास्तवमा, स्थिर आय उत्पादनहरू ती सबै परिस्थितिमा निश्चित र ग्यारेन्टी भएता पनि उनीहरूले मुश्किलले १% माथि उपज प्रदान गर्छन्।
यसको विपरितमा, इक्विटीहरूले नाफा मार्जिन छोडे जुन उनीहरूले २०१ 2013 र २०१ enjoyed बीचको आनन्द उठाएका थिए र तलतिर सर्पिलमा प्रवेश गर्न सक्दछ जुन तपाईंको व्यक्तिगत रुचिहरूको लागि धेरै खतरनाक हो। यस अर्थमा, तपाईं बिर्सनुहुन्न कि स्पेनिश शेयर बजार को छनौट वर्ष को झर्रा संग बर्खास्त गर्न सक्छन् १०% माथि, जबकि यूरोस्टोक्सक्स ० ले यस वर्ष यसको मूल्या of्कनको लगभग १०% छोड्दैछ। भन्नुको तात्पर्य कि इक्विटीहरू अब अन्य वर्षहरूमा जस्तो लाभदायक छैनन्। यद्यपि यो निश्चित इक्विटी बजारमा कती टाढा जान्छ निश्चित निश्चितसँग थाहा छैन। उच्च आर्थिक वृद्धि, लगानीकर्तालाई उच्च फिर्ती।
जे भए पनि, यस प्रकारको वैकल्पिक लगानीले तपाईंलाई फाइदाको श्रृंखला प्रदान गर्न सक्छ जुन धेरै चाखलाग्दो हुन सक्छ ताकि तपाईं अबदेखि नै नाफा कमाउनका लागि पूंजी उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ: यी लाभहरू के हुन् जुन घर जग्गाको बजारमा यी अपरेसनहरूबाट रिपोर्ट गरिएका हुन्? ठिक छ, तिनीहरू बिभिन्न प्रकारका छन् र बिभिन्न अर्थको साथ जस्तै हामीले तल प्रदान गरेका छौं:
La लचीलापन आर्थिक योगदानमा महत्वपूर्ण ईंट क्षेत्र मा सञ्चालन यी आपरेशन को एक साधारण भाजक मध्ये एक हो। धेरै किफायती रकमबाट अरूहरूलाई वास्तवमै ठूलो लगानी प्रयासको आवश्यक पर्दछ।
तपाईसँग पनि धेरै विकल्पहरू छन् यस सन्दर्भमा रहन को अवधि। त्यो हो, तपाईंसँग यो पैसा कुनै पनि समयमा बचाउन सक्ने सम्भावित अभावमा हुनुपर्दछ। आंशिक वा कुल अपरेसनहरूमा होइन। घर जग्गा जमिन को एक महान कमी को रूप मा।
को प्लेटफार्महरू अझै धेरै धेरै छन् जो यस उत्पादनलाई लगानीका लागि बजार गर्छन् र ती मध्ये केही नियमित छन्। यस अर्थमा, तपाईंसँग सबैभन्दा ठूलो ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेहरूको खोजी गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन।
यो क्षेत्र मा एक छ उल्टो सम्भावना धेरै उच्च जबसम्म घर जग्गा क्षेत्र यसको विकासको एक विशाल चरण अन्तर्गत छ। अन्य प्राविधिक विचारहरू पछाडि लगानीमा पनि पूर्वचित्रण गरिएको छ।
र अन्तमा, तपाईं यो बिर्सनुहुन्न कि यो एक हो क्षेत्र विस्तार गर्दै ईंट मा पाउन सकिन्छ कि ठूलो फिर्ताको परिणामको रूपमा अब देखि ठूलो लाभांश उत्पन्न गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » घर जग्गा जमिन
स्वैच्छिक राजीनामा पत्र